December 6, 2020 - Khitalin Media
ဒီပို့လေးကို ယူထားလိုက် သင့်ချစ်သူ သင့်ဇနီး သင့်ခင်ပွန်း ဘယ်တော့မွ မေဖာက်ပြန်ရဲတော့ဘူး …
December 6, 2020 by Khitalin Media
ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သူကို ပစ်ထားပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုလှအောင်နေပါ.. ဒီစာစောင်လေးကို ယောကျာ်း မိန်းမ မည်သူမဆို ဖတ်ပေးပါအထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်သည် မိန်းမ များအား အကြံပေးစာအရ ရေးသားထားပါတယ် ။ စာရှည်ရင် သည်းခံပြီး ဆုံးအောင်သာ ဖတ်ပေးဖို့ စာရေးပြုစုသူ သိန်းမောင်မောင် မှ အကြံပြု မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ… ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ သတင်းတွေချည်း ကြားကြားနေရလို့လေ… ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက် အခြားတစ်ယောက်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင် အသဲနာပြီ ဒေါသတွေထွက် အပြစ်တွေ အပြန်အလှန်တင် ရန်ဖြစ် အအိပ်ပျက် အစားပျက်ပြီး… ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက်နဲ့ သေချင်လောက်အောင် စိတ်ဆင်းရဲ့ ကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်ကြရပါတယ်..။ အချို့ဆို ဘဝပျက် အနာဂတ်မေ့တဲ့ထိ ဖြစ်ကြတာ တွေရတယ်။ကျွန်နော်အနေနဲ့ အဲ့ဒီလို့ မဖြစ်ကြစေချင်ပါဘူး။ အရေးကြီးတာကတော့ ဖောက်ပြန်ခံရတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် စိတ်ရောရုပ်ပါ … Read more
ရင်သား သေးလို့ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့…(ယောင်္ကျားလေးများ မဖတ်ရန်)
မိန်းကလေးတွေအတွက် ရင်သား အလှဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာ ယောင်္ကျားတွေအတွက်လား။ အဲဒီလိုတွေးလို့လဲ မရပြန်ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် မိန်းကလေး ပီသတယ်ဆိုတာကို ဖော်ကြုးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါ။ ဒါပင်မဲ့ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သားကသေးခဲ့ရင်ကောင်း ကောင်းချက်တွေရှိပါတယ်။ ( ၁ )ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာ သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကို ဂရုစိုက်စရာမလိုပါ။ ( ၂ ) ကားစီးတဲ့အခါ ခါးပတ်ပတ်ရင်လည်း သာသာယာယာပါပဲ။ ( ၃ )ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အတွင်းခံလေးတွေကို ကြိုက်တာရွေးနိုင်တယ်။ ( ၄ )ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ သူလေးက လိမ္မာတဲ့ကလေးလို့ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ( ၅ ) Gym သွားကစားတော့လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သွားကစားနိုင်တယ်။ ( ၆ )စားရင်းသောက်ရင်း အမှတ်မထင် ပါးစပ်ကနေကျသွားရင်လည်း အင်္ကျီပေစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ( … Read more
ယောက်ျား တွေ လက်မလွှတ်နိုင်သော မိန်းကလေး ( ကျားမ မရွေး ဖတ်သင့်ပါသည် )
ယောင်္ကျား တွေ လက်မလွှတ်နိုင်သော မိန်းကလေး ဆိုတာ လောကကြီးမှာရှိပါတယ်။ ဒီစာလေးကို ယောင်္ကျားလေးတွေရော၊ မိန်းကလေး တွေကိုပါ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ၀၁. ဥာဏ်ထက်ပြီး သူနဲ့နေရင် ဥာဏ်ရည်တက်လာတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်ဥာဏ်ကောင်းလို့ မနာလိုမဖြစ်ပါနဲ့။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ အားသာချက်တွေ တူညီမှုမရှိပါ။ ကိုယ့်ကို တိုးတက်စေမဲ့သူက ဘေးနားမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ ဝမ်းသာစရာပါ။ ၀၂. ဘယ်အချိန်မဆိုဘေးမှာရှိပြီး အားပေးနေသူ။ ဘယ်အချိန်မဆိုဘေးနားကနေ အားပေးနေပြီး သူရှိတော့ စိတ်ထဲမှာ တကယ်ကို အေးချမ်းစေပါတယ်။ ၀၃. ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက် ဆိုတာ ဘယ်လဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးသူ အမှားလုပ်မိချိန်၊ အလုပ်ကအဆင်မပြေဖြစ်ချိန်၊ အလုပ်သစ်ကို ကြိုးပမ်းနေချိန်၊ သူက ကိုယ့်ကို အမြဲအားပေးနေတယ်။ အားပေးတာတစ်ခုထဲမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်က ဘာလဲဆိုတာကိုပါ … Read more
ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ သွားရည်ကျတတ်ရင် ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ သွားရည်ကျတတ်တဲ့အကျင့်ကို ဘယ်လိုပြင်ယူမလဲ သွားရည်ကျတယ်ဆိုတာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အာခံတွင်းထဲမှာ သွားရည်ပမာဏအမြာက်အမြားဖြစ်လာပြီး တခါတလေမှာ ပြုလုပ်တတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုးသွားရည်ကျတတ်တဲ့အကျင့်ဟာ ပုံမှန်နဲ့ အလွန်အကျွံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ ရောဂါတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ ပုံမမှန်တဲ့အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေပြီဆိုတာကို ပြသနေတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုးသွားရည်ကျရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုအကြောင်းအရင်းတွေရှိနေမလဲ ရပ်တန့်အောင် ဘယ်လိုတွေလုပ်ဆောင်နိုင်လဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အခုပဲဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့် သွားရည်ကျတာလဲ အိပ်စက်တဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မျက်နှာကြွက်သားများဟာ အကုန်ပြေလျော့သွားပါတယ်။ သွားရည်ဆိုတာဟာ အိပ်နေတဲ့အချိန် ပါးစပ်ထဲမှာ စုပြုံလာတဲ့အတွက် အတန်ငယ်ဟနေတဲ့ ပါးစပ်နားမှနေပြီး အပြင်ဖက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းစီးကျသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းအုံးတွေမှာ သွားရည်တွေပေကုန်ပြီး ဘယ်လိုမှသက်သောင့်သက်သာအိပ်စက်လို့မရအောင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွားရည်အလွန်အကျွံစီးကျခြင်းဟာ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်ခုခုရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သလို နှာခေါင်းအတွင်းမှာ ပြည့်ကျပ်မှု၊ … Read more
(6-12-2020 to 12-12-2020)ထိ ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ကံကြမ္မာဟောကိန်း
ကျော်ဘိုဘိုဟိန်း၏ တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီးကံကြမ္မာဟောကိန်း (6-12-2020 to 12-12-2020) တနင်္ဂနွေသားသမီး အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ရသည့်လုပ်ငန်းများ အထူးကြိုးစားအောင်မြင်မည် ။မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစကို ဖော်ထုတ်ခွင့်ရမည့်ကာလပါ ။အိမ်အနီးအနားတွင် အလှူ အတန်းမင်္ဂလာ အကြီးအကျယ်ပြုလုပ်လိမ့်မည် ။ ထိုသို့ပြုပြီးပါက မိမိအိမ်တွင် စီးပွားဥစ္စာစတင် တိုးလာပါလိမ့်မည် ။သင်တန်း ကိစ္စပညာရေးကိစ္စများ အထူးကောင်းမွန်ပြီး အတတ်ပညာအသစ်များကို လေ့လာဆည်းပူး ရပါလိမ့်မည် ။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးတွင် ကားစီးရင်း ဖူးစာဘက်တွေ့ပါမည် ။ကျန်းမာရေး ဇက်ကြောများ လေးလံတောင့်တင်း နေလိမ့်မည် ။ ထီ ၇၃ ပါသော ထီ ထိုးပါ ။ယတြာ လက်ကိုင်ပုဝါထဲတွင် သွပ်ပြားလေးကို အသည်းပုံညှပ်၍ထည့်ပြီး ထုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် သွားလေရာ ဆောင်သွားပါ ။ တနင်္လာသားသမီး အနုပညာလုပ်ငန်းလုပ်သူများ အထူးအောင်မြင်မူရမည့် ကာလပါ ….လုပ်ငန်းအဆက်အသွယ် … Read more
မိန်းမပျက် အင်္ဂါရပ် (၂၅)ရပ်
ဇတ်တော်ထဲက မိန်းမပျက် အင်္ဂါရပ် (၂၅)ရပ် ပြည့်တန်ဆာတူတဲ့ မိန်းမဆိုတာ မိန်းမပျက်အင်္ဂါ ၂၅ ချက် ၁။ လင်ယောက်ျား အရပ်တစ်ပါးသွားတာကို ချီးမွမ်းတတ်ခြင်း။ ၂။ အရပ်ဝေးသွားသော လင်ယောက်ျားအား အမှတ်မရတတ်ခြင်း။ ၃။ လင်ပြန်ရောက်လာသည်ကို မနှစ်သက်ခြင်း။ ၄။ လင်ယောက်ျား ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့အောင် ပြောဆိုတတ်ခြင်း။ ၅။ လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် ချီးမွမ်းစကား မပြောဆိုတတ်ခြင်း။ ၆။ လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် အကျိုးမဲ့ကိုသာ ပြုတတ်ခြင်း။ ၇။ လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် အကျိုးရှိသည်ကို မပြုတတ်ခြင်း။ ၈။ လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် ပြုလုပ်ပေးရမည့်တာဝန်ကို မပြုလုပ်ပေးခြင်း။ ၉။ လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် မပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့အမှုများသာ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။ ၁၀။ အဝတ်ကို မြဲစွာဝတ်၍ အိပ်တတ်ခြင်း။ ၁၁။ လင်ကို ကျောပေးအိပ်ခြင်း။ ၁၂။ ကပြောင်းကပြန် အိပ်တတ်ခြင်း။ ၁၃။ … Read more
စာသားတွေကတော့ ကြမ်းထော်နေတာနော်မိုက်တယ် … ရေးချက်ကို ကြိုက်လို့ ကူးပြီးပြန်တင်တာ
စာသားတွေကတော့ ကြမ်းထော်နေတာနော်မိုက်တယ် … ရေးချက်ကို ကြိုက်လို့ ကူးပြီးပြန်တင်တာ သိန်း၈၀၀၀တန်ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့ ယောက်ျားကိုလိုချင်ရင် …..ကိုယ် ကိုယ်တိုင်၌က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော …. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ အနည်းဆုံး တော့သိန်း ၄၀၀၀လောက်တန်အောင်ကြိုးစားကြပါ .. ကိုယ်တိုင်က ၁၀တန်းလည်းမအောင်ဝင်ငွေက တလ ၂သိန်းမပြည့် ၊ ရုပ်ရည်ကရွက်ကြမ်း ရည်ကြို …. မိဘကလည်း လက်လုပ် လက်စား ဘဝသမား …. အဲ့လိုလူမျိုးတွေက သိန်း ၈၀၀၀ တန် ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့postကို …. သူတို့ရည်းစား ကောင်လေးတွေဝေါမှာ လာလာ Tag ကြတာမြင်တော့ငါ့တပည့်တွေအစားရင်နာမိတယ် ….. Ro ခွင့်ရှိတယ် Overtine ခွင့်မရှိဘူး။ လက်ချင်းချိတ်ပြီး 200 တန် YBS တူတူစီးရဲတဲ့ လက်တွဲဖော် အစစ်ကိုသာရှာကြပါ သားတို့။မင်းဆီမှာငွေတသောင်းပဲရှိမှန်းသိရက်နဲ့ငွေ၈၀၀၀သုံးရက်တဲ့မိန်းမဟာမင်းသိန်း၁၀၀ရှိရင် သူ … Read more
နာနတ်သီးကို ကြိုက်လို့စားနေတာ နာနတ်ရွက် ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိမှန်းမသိခဲ့ဘူး
အသီးကိုသာ ကြိုက်လို့စားနေတာ အရွက်က အဲ့လောက်တန်ဖိုးရှိမှန်းမသိဘူး . နာနတ်ရွက်​ တစ်ရွက်က ဒီ​လောက်​ထိ ဆေးစွမ်းထက်မှန်း ခုမှသိ​တော့တယ်​….မိတ်​​ဆွေတို့လည်း ဖတ်​ကြည့်​လိုက်​​နော် နာနတ်ပင်ဟာဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ် ကာလမှာ နာနတ်သီးရဲ့ ဆေးစွမ်းထက်မြက်ပုံကို သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုနေကြတဲ့ သတင်းများ လည်းရှိနေပါတယ်။ တိုင်းရင်းဆေးဖက်ဝင်တဲ့ နာနတ်သီးကနာနတ်ရွက်လေးတစ်ရွက်နဲ့တင် လူအများ အတွက် ဆေးအသုံးဝင်ပုံလေးကို တင်ပြလိုပါ တယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လိုသူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်- (၁) နာနတ်ရွက်(၁)ရွက်ကို ထုထောင်းပြီးညှစ်ရည်(သတ္တုရည်) ဟင်းခပ်ဇွန်း(၁)ဇွန်းကို သကြားထည့်ပြီး သောက်ပေးပါက ကြို့ထိုးခြင်းပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ (၂) ဒါတင်မကပါဘူး။ အမျိုးသမီးများ မီးယပ် သွေးချုပ်ခြင်း၊မီးယပ်ငုတ်ခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးကာ မီးယပ်သွေးကိုမှန်ကန်စေပါတယ်။ (၃) ကလေးတွေအတွက် အရွက်ညှစ်ရည်ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း(၂)ဇွန်းလောက်တိုက်ပေးပါက ဝမ်းတွင်းကသန်ကောင်တွေကို သေစေပါတယ်။ (၄) အလှအပကျန်းမာရေးအတွက် လူအတော်များများ စိတ်ညစ်ကြရတဲ့ ဥိးခေါင်းကသန်း၊ဗောက်၊အနာအဆာ များကို ခေါင်းလျော်ရည်ထဲနာနတ်ရွက်ထုချေရောစပ်ပြီး … Read more
လူတိုင်း အိမ်တိုင်း ဒီလိုနေ ဒီလိုလုပ်ရင် ဘုန်းကံနိမ့် လာဘ်တိတ်စေပြီး ဆိုးကျိုးများဖြစ်လာနိုင်လို့ သတိလေးနဲ့ ဆင်ချင်ကြပါ
လူတိုင်း အိမ်တိုင်း ဒီလိုနေ ဒီလိုလုပ်ရင် ဘုန်းကံနိမ့် လာဘ်တိတ်စေပြီး ဆိုးကျိုးများဖြစ်လာနိုင်လို့ သတိလေးနဲ့ ဆင်ချင်ကြပါ။ အစဉ်​​ရှောင်​ကြဉ်​ ကြရမည့်​ ဘုန်းကံနိမ့်​​စေ လာဘ်​ပိတ်​​စေ​သော အ​လေ့ဆိုးများ ၁။ ဘုရားခန်းတွင်​ လင်​မယားနှစ်​​ယောက်​မအိပ်​ရ ၂။ ​ယောင်္ကျား၏ညာဘက်​တွင်​မိန်းမ မအိပ်​ရ ၃။ နံနက်​ ၄ခွဲမှ၆နာရီအတွင်းတွင်​ သာသနာ​စောင့်​နတ်​ နတ်​မင်းကြီး​လေးပါးသည်​လူအများ၏ ​ကောင်းမှု မ​ကောင်းမှုကိုကြည့်​ရှု​သောအချိန်​ဖြစ်​သည်​။ ထိုအချိန်​တွင်​ ​မေထုန်​မှီဝဲမှုကို အထူး​ရှောင်​ကြဉ်​ရမည်​။ ၄။ မိမိအိပ်​​သော ခုတင်​ထက်​ သို့မဟုတ်​အိပ်​ရာထက်​မြင့်​​သော​နေရာတွင်​ ထဘီတန်းမပြုလုပ်​ရ။ သား သမီး ​ခေါင်းရင်း မိဘ​ခြေရင်းတွင်​ မ​နေရ မအိပ်​ရ ၅။ မိမိအိပ်​ရာခင်းနှင့်​ပုဆိုး​စောင်​များကို မိမိအိပ်​​သော ​ခေါင်းအုံး​ပေါ်တွင်​ တင်​၍မထားရ ၆။ မိမိ​နေထိုင်ရာထက်​မြင့်​​သော ​နေရာတွင်​ဖျာ ​မွေ့ရာ ​စောင်​များ လှမ်းခြင်းမပြုလုပ်​ရ ၇။ မိမိအိမ်​​ရှေ့အ​ပေါက်​ဝတွင်​ ​မေးကို … Read more